Chọpụta ihe niile dị mkpa iji hụ na Vienna | Bezzia
Ihe ị ga-ahụ na obodo Vienna
Susana Garcia | 26/05/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
Vienna bụ nnukwu obodo mara mma, na-adọrọ adọrọ na ọkaibe nke na-amasị ndị ọbịa niile na-esi na ya agafe. Isi obodo Austria na-atọ anyị ụtọ site na ụlọ akụkọ ihe mere eme ya, akụkụ ya na kọfị. Ọ bụrụ na ịchọrọ obodo niile dị na Europe, n'ezie onye a agaghị ahapụ gị enweghị mmasị, n'ihi na ọ nwere amara ochie ahụ jikọtara ya na nke ọhụụ na nke aka nke na-eku ume n'akụkụ ya niile.
La Vienna obodo bụ ebe kwesịrị nleta. Anyị ga-ahụ ihe bụ isi ebe mmasị ya, mana dịka n'obodo ọ bụla ọzọ, ị ga-ahapụrịrị onwe gị ma gaa n'akụkụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịchọta oghere dị ịtụnanya. Mee ka amara nke Vienna buru gị na njem ọzọ gị.
1 Obí Schönbrunn
2 Obí eze
3 Ọ́bá Akwụkwọ Ọstrịa nke Mba Ọstrịa
4 Opera Vienna
6 Adlọ Stadtpark
Este a maara obí dị ka Versailles nke Vienna, ma ọ bụghị nke obere site n'ọdịdị mara mma ya. E wuru obí a na narị afọ nke XNUMX na saịtị nke ebe ịchụ nta. Ka oge na-aga, ọ ga-aghọ ebe ezumike nke ezinụlọ nke alaeze ukwu ruo mgbe njedebe nke ọchịchị alaeze na mbido narị afọ nke XNUMX. Otu ebe nke bụkwa ebe ebe Eze Nwanyị Ukwu Sissi nọ. Enwere ike ịgba akwụkwọ na njegharị na-eduzi nke eze ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla n'ime ụlọ gị, nwee ọmarịcha ubi ndị a, ma nweta tiketi iji hụ Ebe Ngosi Ihe Ngwe Imperial na-esote obí eze ahụ.
Emi odude ke mbụk center nke obodo anyị na-ahụ ọzọ n'obí na-aghaghị ileta, na Hofburg Obí. Ọ bụ ihe karịrị narị afọ isii ndị obibi nke ezinụlọ eze nke Habsburgs. N'ime ụlọ eze ị nwere ike ịga leta ụlọ ochie, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ụlọ ekpere. Museumlọ ihe nkiri Sisi, nke raara nye ndụ nke eze ukwu nwanyị ama ama ma ọ bụ ọla ọcha nke ụlọ ikpe ahụ, dị ịtụnanya.
Ọ́bá Akwụkwọ Ọstrịa nke Mba Ọstrịa
Ewubere na narị afọ nke XNUMX Enwere ike ịsị na ọ bụ otu n'ime ọmarịcha ọba akwụkwọ akụkọ ihe mere eme n'ụwa, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị ohere a, ịgaghị ịhapụ ya. N'ọbá akwụkwọ anyị nwere ike ịhụ ụkpụrụ ụlọ Baroque, ihe oyiyi ochie, kwaaji na n'ezie nnukwu akwụkwọ.
Vienna State Opera bụ ụlọ ọrụ opera kacha mara amara n'ụwa. E mepere Vienna Opera House na 1869 dị ka a Renaissance ụlọ, na-egosipụta ọrụ site na Mozart. Na 1945 bọmbụ mebiri ụlọ ahụ nnukwu ihe wee were ọtụtụ afọ iji mepee. Taa, anyị ka nọ n'ihu akara ngosi nke obodo, ụlọ akụkọ ihe mere eme nke dị oke mkpa. Nwere ike ịhụ ụlọ ahụ ma werekwa njegharị na-eduzi. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịzụta tiketi dị ọnụ ala maka ọrụ, yabụ ọ bụ nnukwu ohere.
Nke a bụ ahịa kacha mara amara na Vienna niile ma a rụọla ya kemgbe narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ ahịa a na-ahụkarị ebe ị nwere ike ịhụ ụdị ụlọ nri niile. Ebe zuru oke iji hụ ndụ kwa ụbọchị nke ndị Vienna na ịzụta nri mpaghara. Na mgbakwunye, enwere ebe iri nri na ụlọ nri na ụlọ ahịa, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma ịkwụsị ma nwalee efere ndị a na-ahụkarị.
El ogige obodo, meghere na narị afọ nke XNUMX, bụ otu n'ime ebe ị ga-aga na Vienna. Ogige ahụ nwere ụdị asụsụ Bekee, nke nwere ihe ncheta nke Johan Strauss ma ọ bụ ụlọ Kursalon. N'ime ogige a nke ihe dị ka mita 65.000 anyị ga-ahụ ụdị oghere dị iche iche na ahịhịa ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Ihe ị ga-ahụ na obodo Vienna
Ntutu mebiri emebi? Were usoro ndị a weghachite ya
Ihi ụra na onye òtù ọlụlụ bara uru maka ahụike ụbụrụ
Ngwaahịa mara mma kachasị mma